काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले पशुपतिनाथको मुख्य शिवलिङ्गमा सुनको जलहरी राख्ने काम नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो। अन्तरकालीन आदेशमा फागुन १७ गतेलाई दुवै पक्षबीच छलफल गराउने र छलफलको टुङ्गो नलागेसम्म पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र सुनको जलहरी लगाउने कार्य नगर्नु नगराउनू भनी लेखिएको छ।
पशुपति विकास कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालले भने मङ्गलवार राति नै जलहरी हाल्ने कार्य सम्पन्न भएको बुधवार बिहान जनाएका थिए। मङ्गलवार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पशुपतिनाथ पुगी पूजा गरेकी थिइन्। डा. ढकालले सो पूजालाई जलहरी हाल्ने कार्य सम्पन्न भएपछि भएको पूजा बताएका थिए।
रिट निवेदक प्रदेश सभासद् नरोत्तम वैद्यले भने आफू मन्दिर परिसरमा रहेको र सुनको जलहरी नहालिएको दाबी गरेका छन्। वैद्यले भने,’ कोषमा सर्वोच्चको आदेश बुझ्ने कुनै कर्मचारी छैनन्, त्यसैले मैले पशुपतिनाथका भण्डारीलाई यस्तो आदेश आएको छ भनेर जानकारी गराएको छु।’
Tagsअन्तकालीन आदेश पशुपतिनाथ सुनको जलहरी
पूर्वराजाकाे सूभकामना सन्देश : विदेशी प्रभाव र परनिर्भरताबाट मुक्त हुनुपर्छ
अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री मरिसनले दिए नेपाली नयाँ वर्षको शुभकामना
नयाँ वर्षमा एनसेल अफर, यसरी लिनुहोस् आर्कषक सुविधा